Yaa badis badan Guardiola iyo Mourinho ka hor kulankooda caawa? – Gool FM
Yaa badis badan Guardiola iyo Mourinho ka hor kulankooda caawa?
CR Shariif November 11, 2018
( Premier League ) 11 Nof 2018. Fiidka caawa waxaa kulanka ugu adag todobaadkan horyaalka Premier League isaga hor imaan doona Manchester City iyo Manchester United kulanka loo yaqaan Manchester Derby.
Difaacayaasha City ayaa guuldarreystay is aragii u dambeyay ee kooxahan Premier League Xagaagii tagay maraa oo United ay guul soo laabasho leh ku gaartay Garoonka Etihad Stadium.
City haatan waa hogaanimaayasha horyaalka waxayna damac san yihiin in horyaalka ay difaacdaan markii u horreysay tan iyo Man united oo koobka horyaalka xafidatay sanad cayaareedkii 2008-09.
Habada kulankooda caawa yaa guulo badan labada maamule ee Pep Guardiola iyo Jose Mourinho oo si weyn ugu xafiiltamada saaxada cayaaraha.
Shaki kuma jiro nin Guardiola uu yahay mid ka guulo badan macalinka Portugal 16 jeer oo ay kulmeen laakiin ogsoonaaw kaliya finalka ay ku kulmeen maamulayaashan Mourinho ayaa dkaaday waana Finalka Copa Del Rey 2011-kii ii leylinayay Real Madrid.
Hadaba kulamada ay iska hor yimaadeen waxaa 7 kulan adkaaday Guardiola halka Mourinho uu badiyay 3 kulan waxayna barbaro galeen 6 kulan.
Guushuu ugu weyneed waxaa gaaray Guardiola oo Mourinho ku garaacay 5-0 xiligii uu maamulayay Real Madrid halka pep uu macalin u ahaa Barcelona.
Dhammaan xirfadooda macalin waxay maamuleen Gualdiola oo maamulay 451 kooxaha Barcelona Bayern Muchin iyo City uu haatan leylinayo wuxuuna guul gaaray kulamadaas 330 kulan.
Mourinho ayaa xirfadiisa macalin wuxuu maamulay 769 kulan kooxaha kala ah FC Porto, Chelsea oo laba mar uu leyliyay 200-4-07 iyo 2013-05 Inter Milan iyo Real Madrid. Wuxuuna guul gaaray kulamadaas 509 cayaar.
Guulahooda macalin waxaa boqolkiiba boqol wanaagsan Guardiola oo 73-13% guuleystay halka Mourinho uu guuleystay 66.2%
Tirade ugu badan hanashada horyaalka waxaa Badan Mourinho oo wuxuu qaaday 8 horyaal halka Guardiola uu qaaday 7 horyaal.
Yaa Guulo badan Milan iyo Juventus ka hor kulankooda Caawa?
Cristiano Ronaldo oo kalsooni weyn ka muujiyay kooxdiisa Juventus, kahor kulanka caawa ee AC Milan